Maxay Jubaland ka tiri shaqo ka-joojinta Fahad Yaasiin?
Maamul goboleedka Jubaland ayaa soo dhoweeyey tallaabooyinka uu qaaday ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee la xiriirka kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo aheyd gabar ka tirsan NISA, oo hay’addu ay sheegtay inay dileen Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ay beenisay.
Rooble ayaa shaqo ka-joojin ku sameeyey agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, wuxuuna xeer-ilaaliyaha Maxkamadda Ciidamada amray inuu baaritaan ku sameeyey kiiskan.
“Dowladda Jubaland waxay bogaadineysaa doorka iyo go’aanka xilkasnimada iyo mas’uuliyadda ay ku dheehan tahay ee uu ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka qaatay maareynta iyo ka gun-gaaridda arrinka sarkaalad Ikraan Tahliil,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe.
Jubaland ayaa sheegtay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu mas’uul ka yahay amniga doorashada iyo hirgelinta doorashada amni ee dalka.
Dhinaca kale, Jubaland ayaa sheegtay inay cambaareyneyso go’aanka uu madaxweyne Farmaajo kaga horyimid shaqo ka-joojinta Fahad Yaasiin, kaasi oo Jubaland ay ku tilmaamtay “mas’uuliyad darro iyo go’aan uu ku xagal daacinayo go’aamada iyo mas’uuliyadaha ra’iisul wasaaraha dalka.